Amawebhusayithi wamahhala we-Movie Streaming (2020) - Akukho Bhalisa & Ukulanda - Ezokuzijabulisa
UCinephile njengawe ukhetha ukubuka ama-movie ngokucabangela umkhawulokudonsa onomkhawulo. Ngisho nangezinye izikhathi, abakwaCinephiles abasebasha bakuthola kunzima ukuhlela imali yokubhalisela iwebhusayithi ukuze babuke ama-movie wabo abawathandayo. Ukuze sisule lezo zinkinga, siqoqe amagama wewebhusayithi engcono kakhulu yokusakaza ama-movie.
Amasayithi Okusakazwa Kwamahhala - Ukubuka ama-Movie ku-inthanethi
Uhlu lwama- “movie wamahhala” online lunikezwa kanye nalawo masayithi avikelwe kunoma yiluphi uhlobo lokuphazamiseka kwangaphandle. Futhi, lawa masayithi aqinisekisa izimvume ezisemthethweni zabasebenzisi.
UCrackle ubeka phezulu kuqala kuqala kulolu hlu lwamasayithi amahle kakhulu wokubuka ama-movie we-inthanethi mahhala. ICrackle iphethwe ngabakwaSony Pictures, ngakho-ke njengomsebenzisi ungajabulela ama-movie anobude obugcwele, uchungechunge lwakamuva lwe-TV futhi uma uzimisele ukukhetha 'Izaziso Ezingenayo' mayelana nama-blockbusters azayo, ungazenza uvuselelwe ngobuningi be- imininingwane ehlobene nefilimu. UCrackle uvumela abasebenzisi ukuthi babuke amafilimu amangazayo futhi amangalisayo kunoma yini ubukhulu besiqapha sakho nesikrini sakho esitholakalayo.
Amafilimu abasebenzisi abangawabuka eCrackle:Resident Evil, Groundhog Day, The Iceman, Close Meetings of the Third Kind, Shutter Island, Zodiac, Saving the private Ryan, Boogeyman, Resident Evil nezinye eziningi. Ngakho-ke ungagcina le webhusayithi phezulu kokukhethwa kuqala kwakho kokukhetha amasayithi wokusakaza we-movie wamahhala.
I-Crackle uhlelo lokusebenza olusebenzayo lwefoni ephathekayo.
Izinketho zesidlali semidiya esanele zabasebenzisi.
Ukulungiswa okuphezulu nokwenziwe ngcono kokubuka amafilimu.
Amafilimu akalwe kakhulu futhi ahamba phambili ayatholakala eCrackle.
Abasebenzisi babhekana nesikhathi eside sokukhangisa, okubhekwa njengokungenasidingo.
Abasebenzisi abakwazi ukuhlunga amafilimu ngokuya ngokuthandwa.
I-Popcornflix enye indawo yokubuka ama-movie yamahhala ethinta inhliziyo online enothileyo konke ukukhishwa kwama-movie kwakamuva futhi okusha. Imithombo yezindaba yesikrini inamawebhusayithi wePopcornflix. Le yiwebhusayithi enhle eqinisekisa ama-film buffers afana nawe ukuthi ujabulele inqwaba yezinhlobo zokubuka amafilimu afana nomdlalo, ukwethuka, isenzo, ezothando nomndeni. Isici esihluke kakhulu sale webhusayithi ukuthi awudingi ukuthatha noma yiluphi uhlobo lomthwalo wokwenza i-akhawunti-chofoza nje inkinobho ye-PLAY futhi ujabulele ukubuka ama-movie amahle kakhulu atholakala kwi-Popcornflix.
IScreen Media Ventures inikela ngamawebhusayithi wamahhala wama-movie wamahhala kubantu, abathanda ukubuka ama-movie esigcwele.
Ungenza ngezifiso ama-GIF kusuka esikrinini.
Okufana neFilm Buff unganikeza impendulo ngezingxenye ezithile ze-movie, ngenkathi uyidlala ku-inthanethi.
Abasebenzisi abafana nawe bangajabulela isidlali sevidiyo esihle kakhulu ngenkathi bedlala ama-movie kule webhusayithi.
Kuyafaneleka kakhulu ezinganeni.
Akukho ukufinyelela kwemibhalo engezansi ekhonjiswa esikrinini.
Isidlali sevidiyo esithuthukisiwe futhi esithuthukisiwe siyimfuneko eyisisekelo kubasebenzisi.
I-Yidio yiwebhusayithi yama-movie yamahhala eyenziwe ngokwezifiso enikezela ukufinyelela okulula kakhulu kubasebenzisi ukujabulela ama-movie amahle kakhulu online. I-Yidio ingachazwa ngokuningiliziwe njenge- 'Injini Yokucinga Ye-Movie Yamahhala', ikusiza ukwazi ngamawebhusayithi wamahhala wokubuka ama-movie aku-inthanethi.
Izilinganiso kumabhayisikobho e-Yidio zenziwa ngokufanekiswa okuthile okufana ne-R, G, ne-PG-13 kanye nama-Izinhlobo. Ngakho-ke yiziphi izinhlobo ezihlukile ongazibuka ku-Yidio ?? Opopayi, Abomculo, Intshisekelo Ekhethekile, i-Indie, i-Suspense, yama-Classical, amafilimu aseNtshonalanga namadokhumentari nama-movie we-TV.
Ama-movie ongawabuka ku-Yidio:I-Femme fatale, iBlue umbala ofudumele kakhulu, iThe Chase, i-Terminator, Abathathu, ama-Dogateers, kanye ne-Guardians yamaqanda egolide.
Ngakho-ke kufakazelwe ukuthi uYidio, ngakolunye uhlangothi, uYidio uhlanganisa ukusebenziseka okuhlukahlukene kwama-cinephiles afana nawe ngokunikeza ukufinyelela okukhulu kumabhayisikobho wamahhala. Kepha ngakolunye uhlangothi, i-Yidio ivumela ukutolikwa okungalungile kubasebenzisi ngokunikeza inani elanele lezixhumanisi ezingamanga nezingaqondile.
Amafilimu abuyekezwa ngokususelwa kwizikolo zikatamatisi ezibolile.
Ukuhlunga ama-movie kungenziwa 'ngokuthandwa' nangokuthi 'kungezwe muva nje'.
Ungahlunga amafilimu ngokuya ngesilinganiso se-MPAA.
I-Yidio inikeza inketho yokusesha enhle kakhulu yama-movie wamahhala.
Izinombolo ezilinganiselwe zamafilimu zithole ukufinyelela kwamahhala kokubukwa.
I-Yidio inenqwaba yezixhumanisi ezingaqondile.
Ikhwalithi yesithombe ayisihle kangako.
Amavidiyo aphazanyiswa yizikhangiso zentengiso isikhathi eside.
I-YouTube ithole inqwaba yama-movie asakazwa mahhala ku-inthanethi atholakala kalula kuma-Movie ne-Shows YouTube e-YouTube awazinikele kuphela ekubukeni ama-trailer namavidiyo ahlobene nokubhukuda okushushuluza kwezinja kodwa iphinde ithuthukiswe ngama-movie ongawabuka mahhala.
Kodwa-ke, inkinga enkulu ukuthi ngeke uthole noma yimaphi amafilimu amasha esigabeni samahhala se-YouTube sokusakaza ama-movie. Ama-movie atholakala ku-YouTube mdala kakhulu. Ohlolweni lwethu lokugcina lwe-YouTube, sabona ukuthi ama-movie afana no-Missing 411, A Street Cat Named Bob, Salvations, Devils winds, nokunye okuningi ayatholakala ku-YouTube.
I-YouTube iyonke ingathathwa njengeyona etholakala kakhulu futhi elula kunazo zonke ukufinyelela kumawebhusayithi wama-movie wamahhala kodwa ngesikhathi esifanayo ngesikhathi, ithole inqwaba yamaphutha nokusilela emuva.
Uvunyelwe ukunikeza impendulo yakho kukholamu yesigaba ngemuva kokubuka i-movie yamahhala ku-YouTube.
Uzobona ama-movie wamahhala akalwe kangcono ngabasebenzisi abahlukahlukene.
Ngisho namanye amadokhumentari wamahhala nama-movie asingathwa yi-YouTube uqobo.
Ama-movie akamuva awatholakali kaningi ku-YouTube.
Ama-movie wamahhala awanazo izinhlobo ze-HD zekhwalithi yokubonisa.
Amabhayisikobho angenziwa phansi nganoma yisiphi isikhathi ngumuntu owalayishe ngaphandle kokunikeza imininingwane yangaphambilini.
5. Ama-movie we-Snag
AbakwaCinephiles bathole indawo entsha yokuzibonela ama-movie wamahhala akwi-inthanethi awodwa abizwa ngeSnagfilms. Ama-Snagfilms aqukethe amafilimu angaphezu kuka-2000 plus, amadokhumentari nochungechunge lwewebhu. AbakwaCinephiles bangabona inani elanele lama-movie ngokususelwa ekukhetheni okuhle kakhulu komhleli, izinhlobo zomsebenzisi, nezinye izinketho eziningi ezenza ama-Snagfilms abe yiwebhusayithi eyingqayizivele yokusakaza ama-movie.
Ama-Snagfilms asanda kuvuselela iphrofayili yabo yokuqoqwa kwama-movie kanti inguqulo entsha yeSnagfilms iqukethe amafilimu afana noMnu Christmas, Amathoyizi azoba amathoyizi, iMedea, amaVeterans, kanye neMpi, ngaphambi kokuba kube uKhisimusi namanye ama-movie amaningi.
Ama-Snagfilms anikezela ukufinyelela kwamahhala kokubukwa ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo lwesikhathi esithile. Ngakho-ke awudingi ukukhathazeka ngokukhokha noma yiluphi uhlobo lwemali yokubhalisa futhi uzokujabulela i-movie ephelele ephelele ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo lweziphazamiso.
Amafilimu we-Snag nawo anikela ngamafilimu amahle futhi afundisayo wezingane futhi ivumela izindlela zokulanda mahhala. Ungangena ngemvume kuma-Snagfilms kusuka ku-Facebook naku-akhawunti ye-Google plus.
Akukhona ukuphazamiseka okunjalo maqondana nomkhangiso wentengiso.
Ifinyeleleka kuzinhlelo zokusebenza eziningi namadivayisi.
Ama-movie ahlelwe ngokuhlelekile ngezinhlobo ezahlukahlukene namaqoqo.
Ayikho imibhalo engezansi yama-movie.
Ukubhafa kuthatha isikhathi eside ngenkathi kushesha phambili.
Akukho ukulinganiselwa kwama-movie okutholakalayo.
Abantu abazi kangako ngokusebenza okubalulekile okwenziwa uVudu empilweni yama-cinephiles. Kunamafilimu angaphezu kwenkulungwane ahlukaniswe ngezigaba ezahlukahlukene eVudu. IVudu iqukethe ama-movie wamahhala acetshiswe nge-1080pixel, ngakho-ke imilutha yama-movie abantu abadingi ukuyekethisa kwikhwalithi yesithombe sefilimu, noma ngabe ukhetha ukubhaliswa kwamahhala.
Ukukhetha ama-movie wamahhala kuwebhusayithi yeVudu udinga ukuya ngqo ekhasini elisha leVudu ukuze ubuke ama-movie amahhala atholakala kule nkundla. Kunenala ye- izinhlobo ezihlukaniswe ngqo ku-Crime and Suspense, Inspiration and Faith, Action, Kids and Family, Romance, and Comedy.
EVudu, uma usujwayele ukubuka ifilimu, ungacelwa ukuthi uqashe noma uthenge ifilimu. Ungamane ungayinaki ngokuchofoza kunkinobho yamahhala noma kunini lapho ibhokisi lamahhala noma eliqashisayo lezingxoxo livela esikrinini. Uma ufuna ukubhalisela iVudu bese ukhetha ukukhokhela ama-movie bese uqhubeka ngokuqhubekayo.
Izinombolo ezanele zama-movie ku-1080 HD.
Izinketho ezenziwe ngokwezifiso zokuhlukanisa amafilimu ngokusho komsebenzisi.
Uma ufuna ungathenga futhi uqashe ama-movie kuVudu.
Izikhangiso kuwo wonke ama-movie.
Akuwona wonke ama-movie akhululekile ukuwabona, amanye ama-movie adinga ukubhaliswa.
Ukungena nokubhalisa kuyadingeka.
7. Isiteshi seRoku
Isiteshi seRoku futhi siwumhlinzeki wesevisi wokubuka ama-movie wamahhala okusakazwa ku-inthanethi. Ungamane ufake iSiteshi seRoku ku-Smartphone sakho futhi ujabulele ukubuka ama-movie mahhala ngokukhululeka kwakho konke nokulula. I-Roku Channel ivumela ama-cinephiles afana nawe ukuthola inqwaba yezinketho zokubuka amabhayisikobho amangalisayo afana ne-TV yaseBrithani ehamba phambili, iziqephu ezilinganiselwe kakhulu ze-Netflix, namafilimu aqokwe u-Oscar.
Yebo, kubalulekile ukuthi sisho ukuthi kukhona ukuphazamiseka kwezentengiselwano phakathi kwama-movie kepha kuyatholakala imizuzwana eyi-10 ngokubala phansi.
Amafilimu angahlelwa futhi enziwe ngendlela oyifisayo ngezindlela eziningi.
Imibukiso ye-TV iyatholakala.
Abasebenzisi bangenza ngezifiso i-interface yomsebenzisi ngokuthanda kwabo.
Imibhalo engezansi iyatholakala ngezilimi ezahlukene.
Kufakwe nomkhangiso wezentengiso.
Kufinyeleleka kubabukeli base-US kuphela.
Akukho ukufinyelela kumaselula.
I-akhawunti yomsebenzisi iyadingeka.
Amanye Amasayithi Okusakazwa Kwe-Movie Afaneleka Kakhulu (Akhokhelwe Namahhala)
I-Amazon Prime Video
I-CBS All Access
Isikhathi sokubonisa noma ikuphi
Ama-1movie nokuningi okuningi ..!
Ama-movie ongawabuka ku-Roku TV: UMemento, u-highlander, osindise uKhisimusi, uHugo, unxantathu, u-August Rush, nabanye abaningi. Qeda, Bafo .. !! Uma unezinkinga zokuthola i-movie yakho oyithandayo mahhala lapho ungakhetha ama-DVD amahhala ezindaweni eziqashwayo eziqukethe wonke ama-movie amasha nakamuva avela ebhokisini elibomvu.
amawebhusayithi amahle wokubuka ama-movie kuwo
imidlalo ye-gta vice city online
bukela ama-movie mahhala akukho akhawunti
ukukhokha kwe-roblox exe download free
ama-movie wamahhala wokubukwa esikoleni angavinjelwe